Anyị na-enye gị ọnwa atọ nke Amazon Music Unlimited [Onyinye Efu] | Akụkọ akụrụngwa
Miguel Hernandez | | Amazon, Ntugharị, General
Ọ dịla anya anyị nyere ihe ọ bụla nye ndị na - agụ akwụkwọ anyị na ndị na - agụ akwụkwọ anyị hụrụ n'anya, ya mere, dịka anyị chọrọ ichetara gị na anyị ka nọ ebe a, na n'ezie anyị nwere ekele na ị na - eso anyị mgbe ọ bụla anyị wetara nyocha, nkuzi na ntuzi aka ka ị nwere ike ịma maka teknụzụ ọhụụ, anyị kpebiri ịkwụghachi gị n'ụzọ anyị maara nke ọma. Anyị na-ewetara gị raffle nke ndị anyị masịrị, nke ọ dị mfe isonye na ya.
Anyị ga-enye gị ọnwa atọ nke Amazon Music na ị nwere ike ịgbapụta na gị onwe gị na Amazon akaụntụ ma ọ bụ onye ị chọrọ, ma si otú a na-ege egwu kachasị mma na mma kachasị mma na-enweghị oke.
Yabụ ị nwere ike ịbanye n'ime egwu n'ịntanetị na-akparaghị ókè, uru nke "adịchaghị" atụmatụ nke ọrụ egwu bụ na n'etiti ihe ndị ọzọ, ị ga-enwe ike ibudata egwu a na-adịghị n'ịntanetị ka ị ghara ịta ahụhụ mgbe ị na-eme njem na ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ na ịnweghị mkpuchi, n'otu ụzọ ahụ na ị gaghị anụ mgbasa ozi, dịka ọ na-eme ihe atụ na Spotify Free.
Mgbe niile achọrọ, ịnwere ike ịgbanwe egwu ahụ mgbe ọ bụla ịchọrọ
Gee egwu na-anọghị n'ịntanetị, ma ị nwere mkpuchi ma ọ bụ na ịnweghị, ị gaghị eri data
Mekọrịta egwu gị niile na Alexa
Unlimited ohere a katalọgụ nke karịrị 50 nde songs.
Olee otú m banye raffle?
Anyị na-achọ ime ka ọ dị mfe, yabụ ị ga-emerịrị ihe ndị a:
Chọrọ ọnwa 3 n'efu nke Amazon Music Unlimited? Soro na nke anyị #Iwu, ọ dị mfe. ???https://t.co/H7prJgddCF
- Akụrụngwa Akụkọ (@agadget) Nwere ike 8, 2019
Subsdenye aha na YouTub ọwasitere na Actualidadgadget
Soro ActualidadGadget na Twitter (@gadget ugbu a)
Nye RT na Tweet nke anyị hapụrụ n'okpuru.
Ga-enwe ike isonye na raffle ahụ ozugbo ebipụtara tweet ruo na nso May 14, Anyị ga-enye nsonaazụ ahụ na Podcast na anyị na ndị ọrụ ibe AllApple na-eme kwa izu na YouTube.njikọ) gburugburu 23: 45 pm anyị ga-agwa onye mmeri site na Twitter.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Anyị na-enye gị ọnwa atọ nke Amazon Music Unlimited [Onyinye Efu]
Naanị m ga-enye RT, n'ihi na idenye aha m na Twitter, YouTube, na ịgbaso blọgụ ahụ, ana m eme ya ọtụtụ afọ.
Ka anyị hụ ma ọ bụrụ na ọ ga - adịtụ mma, ọ ga - emetụ m aka, Achọrọ m ịnwale ngwa ahụ wee hụ katalọgụ egwu ha nwere. N'ihi na echere m na m gbalịrị ha niile….
Zaghachi Raúl Avilés
Logitech na-ewebata igwe ojii G502 Lightspeed wireless